လတ်ဆတ်သော URL: မျှဝေရန်အတွက်သင်၏ URL များကိုရှင်းလင်းပါ Martech Zone
လတ်ဆတ်သော URL - မျှဝေရန်အတွက်သင်၏ URL များကိုရှင်းလင်းပါ
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 17, 2014 သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 24, 2014 Douglas Karr
Wistia မှလူကောင်းများသည် cross-browser script ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည် လတ်ဆတ်သော URL ခင်ဗျားရဲ့ကွန်ရက်ထဲကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်လို့ရပြီးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးခြေရာခံခြင်းနှင့်သင်၏ URL မှမလိုအပ်သော querystring ကုဒ်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏စည်းရုံးလှုံဆော်မှုကုဒ်များကိုလူများကသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများဝေမျှသည့်အခါပြန်လည်အသုံးမပြုရဟုဆိုလိုသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်မှာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမေးမြန်းမှုမှာပါ ၀ င်တဲ့အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတခုရှိရင်သင့်ရဲ့လက်ခံသူတစ်ယောက်ကဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတစ်ဆင့်ဒီလင့်ကိုမျှဝေမယ်ဆိုရင်လူတော်တော်များများဟာသင့်ရဲ့ဆိုက်ကိုရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပြီးအီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှာလည်းဖြစ်တယ်။ လူမှုမီဒီယာမဟုတ်။
သင်၏ site ထဲသို့ script ထည့်ရန်သင်၏မတိုင်မီအောက်ပါ script tag ကိုထည့်ပါ tag:
ယခု script သည် Google Analytics, Pardot, နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ HubSpot, Clicky နှင့် Analytics.js (Segment.io) ။ မှာ Jason မှအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစွန်အဖျား!
Tags: နေခြည်ကလစ်လတ်ဆတ်သော urlသစ်ပင်ကြီးanalytics googlehubspotခွင့်လွတ်Segment.iowistia
19:2014 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 9, 54 တွင်
စိတ်ကူး ထည့်သွင်းထားသည် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် @brendanschwartz: disqus!
မတ်လ 24, 2014 မှာ 8: 44 pm တွင်